खाडीमा नेपाली अलपत्र परेका उजुरी बढे, उद्धार कसले गर्ने?
निर्मला घिमिरे शनिबार, चैत ८, २०७६, १३:१५
काठमाडौं- ‘मेरो छोरा ५ महिनाअघि दुबई गएको। ५ दिन अगाडिदेखि उसले खान पाएको छैन रे, रुखमा कहाँ भोकै बसेको छ रे। म यतैबाट पैसा पठाइदिन्छु मेरो छोरालाई खान देओ भनेर भनेँ तर खान दिएको छैन रे, जसरी हुन्छ उद्धार गर्नुपर्‍याे।’ बाराकी शिवकुमारी धिताल वैदेशिक रोजगार विभागमा गुनासो गरिरहेकी थिइन्।
उनले छोरा राजेश धितालको तत्काल उद्धार गरिपाउँ भन्दै विभागमा उजुरी दिएकी छन्।
यस्तै कैलालीका रोशन सुनारले आफन्त मुकेश घिमिरे साउदीमा समस्यामा परेको भन्दै तत्काल उद्धार गरिपाउँ भनेर विभागमा उजुरी दिएका छन्। वेटर कामका लागि भन्दै अलएसमास म्यानपावर कम्पनीमार्फत् साउदी पुगेका उनलाई कम्पनीले भाँडा माझ्ने काम लगाएको तर पारिश्रमिक नदिएकाले समस्यामा रहेको भन्दै उद्धार गरिनुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय खाडीलगायतका मुलुकमा विभिन्न समस्या देखाउँदै उद्धारका लागि उजुरी बढेको विभागका निर्देशक हरिप्रसाद ज्ञवालीले बताए। ‘पछिल्लो समय आफन्त विदेशमा समस्यामा रहेकाले उद्धार गरिपाउँ भन्ने खालका उजुरी बढेका छन्‚’ निर्देशक ज्ञवालीले नेपाल लाइभसँग भने। अहिले दैनिक ५ वटाभन्दा बढी उद्धारका लागि उजुरी आइरहेको विभागले जनाएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले शुक्रबार मध्यरातको १२ बजेबाट कोरोना अतिप्रभावित मुलुकबाट आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। सो पश्चात यूरोपेली मुलुकहरु, पश्चिम एसियाली मुलुकहरु, खाडीसँगै इरान, दक्षिण कोरिया, जापानलगायतका मुलुकबाट मार्च २० देखि अप्रिल १५ सम्म ती मुलुकका नागरिकमात्र होइनन्, त्यहाँ रहेका नेपाली पनि नेपाल प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई आउनसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
उद्धार कसले गर्ने?
गन्तव्य मुलुकबाट आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार हुने की नहुने त?, उद्धार गरेर नेपाल ल्याउने वा कुटनीतिक पहल गरी गन्तव्य मुलुकमै समस्याको हल गर्ने? यस विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।
समस्यामा पर्दा उद्धार हुन्छ : श्रम मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गन्तव्य मुलुकस्थित नेपालीहरु समस्यामा परे उद्धारको काम नरोकिने जनाएको छ। तर उद्धार गरेर स्वदेश फिर्ती गर्ने वा गन्तव्य मुलुकमै सुरक्षित वातावरण मिलाउने भन्ने विषयमा खुलाइएको छैन।
‘उद्धार नियमित काम हो, समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धार हुन्छ’ श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरेले नेपाल लाइभसँग भने।
जहाँ नेपाली त्यहाँ सरकार : परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जहाँ नेपाली त्यहाँ सरकार रहेको बताएका छन्। ‘सरकार नेपाली जनताको अभिभावक हो, नेपालीहरु जहाँ समस्यामा हुनुहुन्छ त्यहाँ सरकार छ। गन्तव्य मुलुकस्थित नेपालीहरु समस्यामा परेमा उद्धार हुन्छ‚’ नेपाल लाइभसँग बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने।
दक्षिण कोरियामा बढे कोरोना संक्रमित दक्षिण कोरियामा कोरोना (कोभिड–१९) का संक्रमित पछिल्लो समयमा बढेको देखिएको छ। यहाँ संक्रमित हुनेहरुको संख्या पछिल्ला हप्ताहरुमा बढ्दै... मंगलबार, असार २३, २०७७
वैज्ञानिक वन कार्यक्रमप्रति राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिको असन्तुष्टि बुधबार, असार २४, २०७७
दक्षिण कोरियामा बढे कोरोना संक्रमित मंगलबार, असार २३, २०७७